पूजा विना प्रकाश भोकै ! – Online Khabar 24
पूजा विना प्रकाश भोकै !
पूजाले आफूमाथि भद्दा टिप्पणी गरेपछि प्रकाशले जवाफ फर्काएका हुन् ।पूजाले मुन्द्रको कमेडी क्लबमा भनेकी थिइन्, ‘इन्ड्रष्टिबाट हराइसकेका मान्छेलाई मेरो कन्ट्रोभर्सीले आज हिट बनाएको छ । कम्तिमा मेराे कारणले त्यसको घरमा चामल त भरिएको छ नि त । मैले गर्दा उहाँलाई सबैले चिन्नुहुन्छ ।
पूजाले १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला गलत भन्दियो, उहाँ हिट हुनुभयो । मलाई घाटा परे पनि कसैलाई त राम्रो भयो नि त । पहिले कसैले हेर्दैन थिए होलान्, अहिले कार्यक्रम हिट भएको छ । मैले गलत बोलेका कारण कार्यक्रम हिट भयो ।’
प्रकाशले रजतपट कार्यक्रममार्फत् जवाफ दिँदै भने, ‘कहिलेकाहीँ नसोचेका कुरा ए क्कासी आउँदा यस्तो गल्ती हुन सक्छ । जमानाको कुरा त्यो, रात गइ बात गइ । गल्तीलाई सच्या उनुको साटो यतिखेर आएर मैले गरेका गल्तीका कारण उसको अर्थात् मेरो दानापानी चलिरहेको छ रे । उनले गर्दा मलाई धेरैले चिन्ने भए रे । त्यही कारणले गर्दा दर्शकहरुले मेरो कार्यक्रम हेर्न भएका छन् रे ।’
आफ्ना दर्शकहरूको आग्रह अनुसार जवाफ दिएको बताउँदै प्रकाशले भने, ‘हो, तपाईँकै कृपा दृष्टिका कारण मेरो दानापानी चलिरहेको छ । म पत्रकारितामा आउँदादेखि नै हजुर नै मरो पालनहार हुनुहुँदो रहेछ । यतिखेर आएर थाहा पाएँ । यदि हजुर यो धर्तीमा नभएको भए त म त भोकै म’र्ने रहेछु ।
हजुरको जय–जय होस् । हजुरको कृपादृष्टि सदैव बनाइरहनुहोला, किनकी मेरो दानापानी सदा सर्वदा चलिरहोस् । हजुरले त्यति १४ अञ्चल जान्दिएको भए म त एक एक दाना चामलको दानाका लागि तड्पिने रहेछु, आज आएर थाहा पाएँ । अरु अन्तर्वार्तामा पनि हजुरको बोली यसरी नै चिप्लिरहोस्, ताकि सबै पत्रकारको दानापानी हजुरकै कारण चलिरहोस् ।’ यो खबर साभार गरियको हो ।
Prevआज घट्यो सुनको मूल्य, प्रतिताेला कति ?